Home Wararka Waxaa maanta xaafadda H/wadaag ee magaalada Beledweyne guryahoodi lagala baxay sadax dhalinyaro...
Waxaa maanta xaafadda H/wadaag ee magaalada Beledweyne guryahoodi lagala baxay sadax dhalinyaro oo beesha Reer Ow Xasan ah:
Murashax xildhiban dildhiban Maxamed_Cabdullaahi_Goosaar Ayaa barta Facebook iyo Twitter ku leyahay ku qoray qoraal hoose Aqri
Cabdiqafaar Cumar Mc Xasan.
Cabdullaahi Axmed daahir Cabdi.
Maxamed Xasan Nuur sh C/qaadir.
waxaana falkaasi geystay dad ku heyb ah Ikraam Tahliil oo ah xubin ka tirsaneyd hey’adda NISA, muddo laba bil ah oo warkeeda la weysanaa kadib ay shalay dowladda Soomaaliya sheegtay in gabadhaasi ku baxday gacanta Alshabaab, taasoo ah arin aan ka daadagin qoyska gabadha iyo bulshada Soomaaliyeedba.
Anigoo la qeybsanayo qoyska Ikraam xanuunka ay dareemayaan, aaminsanna xaqa ay u leeyihiin in ay ogaadaan xaqiiqda ku gadaaman maqnaanshaha gabadhooda iyo in caddaaladda la mariyo cid walba oo ku lug leh arintaas, waxa aan jeclahay inaan halkan ku cabiro farriimo dhowr ah.
NISA waa hey’ad dowladeed ee ma ahan shirkad Reer Ow Xasan, qofkii ay ku caddaato inuu xilkiisa dowladeed ku tagri falay isaga ayaa masuuliyadeeda leh ee ma lahan dad shacab ah oo ay heyb wadaagaan, hadaba waxaa dulmi aanan la qaadan karin ah in Beesha Reer Ow Xasan loo dakaneyo dhibaato aysan shaqa ku laheyn.
Hoggaanka dhaqanka, Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Beesha Gaaljecel ayagoo dhowrayo ehelnimada, darisnimada iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada beelood, waa in ay soo faragaliyaan waxa maanta ka socdo galbeedka Beledweyne, dhalinyarada aanan waxba galabsan badqabkooda iyo in ay helaan xoriyaddooda ka shaqeyaan.
Warbaahinta iyo dadka baraha bulshada ku baahinayo iyaga oo aan fasax u haysan, muuqaalo qof dhibbana ah oo xoriyaddiisa laga qaaday lana bahdilayo ha ogaadaano in ay meel ka dhac iyo xadgudub kula kacayaan dhibanayaashaas.